सर्वदलीय बैठकमा रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न : दमौलीमा ममाथि त्यस्तो किन गरियो? – Koshidaily
मुख्य पृष्ठराजनीतिसर्वदलीय बैठकमा रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न : दमौलीमा ममाथि त्यस्तो किन गरियो?
सर्वदलीय बैठकमा रामचन्द्र पौडेलको प्रश्न : दमौलीमा ममाथि त्यस्तो किन गरियो?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटारमा राखेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अरूले भन्दा भिन्न कुरा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको भूमिका समन्वयकारी नभएको र संविधानको मर्म बुझ्न ओलीले नचाहेको पौडेलको भनाइ छ।
पौडेलले १२ बुँदामा आफ्ना कुरा राखेका थिए। त्यसमा अन्तिम बुँदा गत मंसिर १७ गते तनहुँमा पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको विषय छ। ‘दमौलीमा मंसिर १७ गते त्यस्तो घटना किन घटाउनुभयो?’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पौडेलले सोधे।
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार सम्बन्धीका आरोपमा ढाकछोप गरेको पनि पौडेलको भनाइ थियो। ‘आफन्त र मन्त्रीहरूका भ्रष्टाचारका आरोपहरूको ढाकछोप आफैं अगाडि सरेर गर्नुभयो। देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी छ। तर ठूला भ्रष्टाचार काण्ड चलाउन नसक्ने अवस्थामा अख्तियार पुगेको छ। अदालत पनि प्रभावमा पारिएकोजस्तो देखिन्छ,’ पौडेलले भने।
पौडेलले जनतालाई परेका समस्याबारे कहिल्यै सोचेको छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका छन्। ‘अहिले जनतालाई परेको समस्याका बारेमा कुनै दिन सोच्नु भएको छ?,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पौडेलले प्रश्न गरे, ‘कोरोना रोकथाममा के-के गर्नुभयो?’ सडकमा प्रदर्शन भइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै पौडेलले राजा फाले पनि त्यसलाई बिर्सेर राष्ट्रपतिको तामझामले आजको परिस्थिति सिर्जना भएको पनि बताए।
ओलीलाई सुरूमै भेटेर पाँच वर्ष सरकार चलाउनुस् र पक्षपात नदेखिनुस् भनेको स्मरण पौडेलले गरेका थिए। संवैधानिक आयोग रिक्त रहेको भन्दै उनले आफ्ना मान्छे नराख्न पनि आग्रह गरे। ‘एउटा रोष्टर बनाएर उपर्युक्त छनौटमा किन लाग्नु भएन? संवैधानिक नियुक्तिमा तपाईं र मेरो सभापतिले मात्रै अनुकूल ठान्ने व्यक्ति खोज्नु हुन्छ भने मै विरोध गर्छु,’ उनले भने।
दल विभाजन अध्यादेशलगायत अध्यादेश किन ल्याएको भन्ने प्रश्न पौडेलले गरेका थिए। संसद अधिवेशन छिटो अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने सुविधाको बाटो रोज्नुपर्नाका कारणसमेत पौडेलले प्रधानमन्त्रीसँग जान्न चाहेका छन्। संसद अधिवेशन छिटो बोलाउन उनले माग गरेका छन्।
‘प्रतिगामीको धज्जी संसदबाटै उडाइन्छ, संसद बोलाउनुस्,’ उनले भने। उनले आमसञ्चार विधेयक स्वतन्त्रता विरोधी रहेको, अयोध्या माडीमा पर्छ भनेर भारतलाई चिढ्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको पनि बताएका छन्।